विचार – नेपाली संगसार
access_time ८ जेष्ठ २०७८, 4:41 pm
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसंगै राजनीतिक दल लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट यसको विरोध सुरु भएको छ। शुक्रबार मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा…
access_time १२ बैशाख २०७८, 4:55 am
स्वाव संकलन प्रक्रियाः शुक्रवार दिउँसो स्वासप्रश्वासको समस्यासंगै कोरोना भाइरसको संक्रमणसंग मिल्ने लक्षण देखिएपछि दंगिशरण गाउँपालिकाको एउटा निर्माण कम्पनीको साइटमा कामगर्ने एक जना इन्जिनियर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि घोराहीको संगम पोलिक्लिनिकमा आए । त्यहां चिकित्सकले उनको स्वास्थ्य…
access_time १६ चैत्र २०७७, 10:16 am
२०७८ सालमा गर्न लागिएको जनगणना नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछिको पहिलो जनगणना हो । यो जनगणनाले सात सय ५३ वटै पालिका, जसमध्ये चार सय ६० गाउँपालिका, दुई सय ९३ नगरपालिका, महानगरपालिकाहरू, उपमहानगरपालिकाहरू, सातवटै प्रदेश र केन्द्र सरकारका…
access_time २१ फाल्गुन २०७७, 1:26 am
प्रिती थापा शिक्षक भिएस निकेतन स्कुल काठमाडौ । भनिन्छ, मान्छे जन्मेदेखी हरक्षण, हरपल केही न केही कुरा सिकिरहेकै हुन्छ । अँध्यारो रातले अन्धकारसँग लड्न सिकाउँछ त सुनौलो बिहानीले सजग भएर हिँड्न सिकाउँछ । यति थाहा…
access_time १५ माघ २०७७, 3:11 pm
हिजो आज सामाजिक संजालमा नाटकै हो र नौटंकी नै हो, भन्ने शब्द अत्यन्तै भाईरल भएको छ ।तर, देशमा भने निकै चुनौती बढेको छ र अहिले देश संकटपूर्ण स्थितिमा छ । कतै नारा जुलुस छ, त…
access_time १२ पुष २०७७, 3:44 pm
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले ससंद विघटन गरेपछि सडक आन्दोलन गरि ‘हामी यहाँ छौ’ भन्दै सडकमा देखिएका केहि कमरेडहरु हिजोआज सामाजिक संजालमा भाईरल छन, नहुन पनि किन? हिजो जनताले सरकार कता छ ?…
‘जनयुद्धले चिनाएको होलेरीलाई नम्बर–१ बनाउने अभियानमा छौं’ (भिडियाेसहित)
access_time १० पुष २०७७, 10:01 am
बालाराम बुढा रुन्टी महाप्रभु जन्मेको गाउँ होे, रुन्टीगढी। २०७२ सालमा राज्य पुनर्सरचना हुँदा रोल्पाको दक्षिणी भेगमा पर्ने दाङ र प्युठानसँग जोडिएको क्षेत्र जोडेर रुन्टीगढी गाउँपालिका निर्माण गरिएको थियो। महाप्रभुले होलेरी देखिमाथि गढी भन्ने गाउँमा तपस्या…
मुक्तक के हो ? र कसरी लेख्ने मुक्तक ?
access_time १९ मङ्सिर २०७७, 9:46 am
मलाई धेरै जनाले म्यासेजमा मुक्तक लेख्न सिकाइ दिनुहोस। तपाईं सँग मुक्तक सिक्नको लागि आवस्यक लेख छ भने दिनुहोस भन्नू हुन्छ। पुरानो लेख आज कतै भटियो अनि यता राखेँ। आफुसँगै सुरक्षीत राख्नुस र यो लेख मुक्तक…
‘चीन र भारतको गोटी बन्ने होइन नेपालको माटोका लागि राजनीति…
access_time ६ मङ्सिर २०७७, 5:38 am
काठमाडौ । कुनै जमानामा बलिउडमा एकछत्र राजगरेकी नेपाली छोरी मनिषा कोइराला वनारसमा हुर्किएकी हुन् । उनी विपि कोइरालाको श्रीमति सुशिला कोइरालकोे काखमा हुर्किएकी हुन् । सुशिला फिल्म क्षेत्रको निकै सौखिम थिइन् ।त्यसैले मनिषालाई फिल्म क्षेत्रमा…
नेपाल टेलिकमले टावर ठडाउँन मात्र बनाउँछ कि चलाउन पनि ?
access_time १६ असोज २०७७, 4:30 am
विन‍ोद डाँगी बर्षौ भएछ लेखहरु नलेखेको पनि । व्यस्तताले पनि लेख्न भ्याइएन धेरै समय । अनि कहिले लेख्छु भन्दा पनि के बारेमा लेख्ने भनेर दोधारमै । ५-६ पटक त लेख्दा लेख्दै छोडेका केही लेखहरु अझै…